OnePlus သည်၎င်း၏မေးခွန်းနှင့်အဖြေကဏ္ section ကိုအသစ်သောဖြေရှင်းချက်သံသယများဖြင့်အသစ်ပြောင်းသည်။ | Androidsis
OnePlus သည်၎င်း၏မေးခွန်းနှင့်အဖြေကဏ္ section ကိုအသစ်သောမေးခွန်းများနှင့်အတူမွမ်းမံသည်
ဒါကအတိတ်ကာလကထပ်ခါတလဲလဲပြုတော်မူပြီ ယခုအခါတွင်ထုတ်လုပ်သူသည်ထုတ်ပြန်ချက် ၁၀ ခုထက်ပိုသော၎င်း၏အနာဂတ်အစီအစဉ်များနှင့်အခြားအရာများကိုရှင်းလင်းရန်ရည်ရွယ်သည်။
ဤတွင် OnePlus တင်ပြသောမေးခွန်းများနှင့်အဖြေများမှာ -
Q: OnePlus 10 နှင့် 5T စီးရီးများတွင် Android5ကိုမည်သည့်အချိန်တွင်ရရှိနိုင်သနည်း။
R: ကျွန်ုပ်တို့သည် OnePlus5နှင့် 5T အတွက် Open Beta ဗားရှင်းကိုထုတ်ပြန်ပြီးပါပြီ။ ဤအရာကို အသုံးပြု၍ Community အတွင်းရှိ OBT ပို့စ်မှ update ကိုသင်ရယူနိုင်သည်link ကို။ပိုပြီးကြေညာချက်များအဘို့အညှိနေပါ။
Q: Open Beta အသစ်ကိုမည်သည့်အချိန်တွင် OnePlus7နှင့် 7T စီးရီးများတွင်ဖြန့်ချိမည်နည်း။
R: ကျွန်ုပ်တို့သည်တဖြည်းဖြည်း OnePlus7နှင့် 7T စီးရီးများ၏နောက်ဆုံးပေါ် Open Beta ဗားရှင်းကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းတွန်းအားပေးနေသည်။ ရက်အနည်းငယ်အကြာတွင်၎င်းသည်ပွင့်လင်းသော beta သုံးစွဲသူများအားလုံးကိုပို့ဆောင်ပေးမည် သည်းခံခြင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Q: multitasking interface ၏လုပ်ဆောင်မှုစွမ်းရည်ကိုမြှင့်တင်နိုင်သည်ဟုအချို့သောအသုံးပြုသူများကအကြံပြုသည်။
R: Application များကိုပိုမိုလွယ်ကူမြန်ဆန်စွာပြောင်းရန် multitasking interface ကိုကျွန်တော်တို့ပိုကောင်းအောင်လုပ်ထားပါပြီ။ ၎င်းသည် Play Store ၏ Beta အဆင့်တွင်ရှိပြီးရက်အနည်းငယ်အတွင်းတရားဝင်ထုတ်ပြန်လိမ့်မည်။
Q: Dark Mode တွင်မည်သည့်နောက်ဆုံးသတင်းများကိုကျွန်ုပ်မျှော်လင့်နိုင်ပါသလဲ။
R: အသုံးပြုသူများပိုမိုလွယ်ကူစေရန် Dark Mode ကိုတစ်ချက်နှိပ်ရုံဖြင့် Quick Settings ခလုတ်ကို Quick Settings တွင်ထည့်ရန်စီစဉ်ထားသည်။ Open Beta ဗားရှင်းကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုသူများသို့မပို့ဆောင်မီ၎င်းတွင်အတွင်းစစ်ဆေးမှုကိုပြုလုပ်လိမ့်မည်။ ဒီ feature update ကိုယခုလအတွင်း၌စမ်းသပ်ရန်စီစဉ်ထားသည်။
R: ကျွန်ုပ်တို့သည်အသံအတိုးအကျယ်ကိုယေဘုယျချိန်ညှိမှုများပြုလုပ်ပြီး၊ အသံအတိုးအကျယ်ကိုနိမ့်ဆုံးအထိလျှော့ချခြင်း၊ အသံအတိုးအကျယ်ပြောင်းလဲမှု၏ပထမအဆင့်ငါးဆင့်အတွက်ကွေးကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်စေခြင်းနှင့်ယခင်ဗားရှင်းများ၏တုံ့ပြန်ချက်များအပေါ် အခြေခံ၍ အပြောင်းအလဲများပြုလုပ်ခြင်းပါဝင်သည်။ ယခု update ကိုယခုလ၏ Open Beta ဗားရှင်းသို့ပေါင်းစည်းလိုက်သည်။
Q: OnePlus Launcher ကိုအဆင့်မြှင့်ပြီးနောက် application ကိုအသုံးပြုသောအခါနှောင့်နှေးသည်။ Launcher icon အောက်ရှိနာမည်ပျောက်သွားသည်။ နောက်ဆုံးဗားရှင်းသို့ update ပြီးနောက် application သည် animation ကိုလွှတ်လိုက်သည်သို့မဟုတ်ကျသည်။
R: အထက်ဖော်ပြပါပြissuesနာများသည်နောက်ဆုံးပေါ် OnePlus Launcher တွင်ပြေသွားသည်၊ ကျေးဇူးပြု၍ Play Store ရှိအက်ပ်ကိုမွမ်းမံပါ။
Q: OnePlus Switch ကိုအသုံးပြုနေစဉ် "ဖုန်းအသစ်" သည်အဘယ်ကြောင့်ပူသနည်း။
R: လွှဲပြောင်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း "ဖုန်းအသစ်" သို့မဟုတ်လက်ခံသူသည်ဒေတာများကိုလက်ခံစဉ်ဒေတာများကိုပြန်လည်ရယူရန်နှင့်သက်ဆိုင်ရာ software ကိုတစ်ချိန်တည်းတွင်တပ်ဆင်ရန်လိုအပ်သည်။ မည်သည့်လုပ်ဆောင်မှုကိုမျှမထိခိုက်စေဘဲပုံမှန်အပူချိန်မြင့်တက်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်နိုင်သည်။ အပူချိန်အနည်းငယ်မြင့်တက်ရန်မှာပုံမှန်ဖြစ်သည်။
Q: OnePlus 8 စီးရီးများတွင်ဘက်ထရီချွေတာသုံးစွဲထားသည့်အခါ၊ အညွှန်းသို့မဟုတ်အခြားအက်ပ်များကိုအသုံးပြုသောအခါတစ်ခါတစ်ရံတွင်အချက်ပြမှုအားနည်းလာနိုင်သည်။
R: ဘက်ထရီချွေတာသည့်စနစ်တွင်မျက်နှာပြင်ပိတ်ထားပါကပါဝါချွေတာရန်အတွက်စက်သည် GPS ကိုပိတ်လိမ့်မည်။ ဂျီပီအက်စ်ကိုထိန်းသိမ်းရန်ကျွန်ုပ်တို့ကြိုးစားသင့်သည် -
1. Battery Saver ကိုပိတ်ထားရန်၊ Deactivate လုပ်ရန် - ချိန်ညှိချက်များ - Battery-Deactivate Battery Saver;
2. Disable လုပ်ရန် standby optimization ကိုပိတ်ပါ။ Settings-Battery-Battery optimization - ညာဘက်အပေါ်ထောင့်ရှိ Advanced-optimization ကိုနှိပ်ပါ။
Q: OnePlus 8 စီးရီးတွင်ဟော့စပေါ့ဝေမျှနေစဉ်အဘယ်ကြောင့်အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုမရှိသနည်း။
R: hotspot share settings တွင် "Wi-Fi only sharing" သို့မဟုတ် "mobile data sharing only" ကိုလုပ်နိုင်သည်။ ၎င်းကို "အလိုအလျောက်ပြောင်းလဲမှု" သို့သတ်မှတ်ပါ။ Setting-Wi-Fi နှင့် Internet-Hotspots နှင့် Connection Sharing-Configuration Settings - Auto-Switch ကိုရွေးချယ်ပါ။
R: Wi-Fi ဖြင့်အလိုအလျောက် update လုပ်ခြင်းသည် Android app တစ်ခုချင်းစီအတွက်ပုံမှန် Android setting ဖြစ်သည်။ ဤသတိပေးချက်များကိုရပ်တန့်ရန် Google Play ဟမ်ဘာဂါ menu settings သို့သွားပြီးချိန်ညှိချက်ကို "Automatic app update" သို့ပြောင်းပါ။
Q: Alexa OnePlus 8 series built-in ဖုန်းတွင် Alexa နှင့်ကျွန်ုပ်ဘာလုပ်ရမည်နည်း။
R: Alexa ကိုအရာများစွာအတွက်သုံးနိုင်သည်။
၁။ တေးဂီတကိုဖွင့်ပါ၊ အော်ဒီယိုစာအုပ်တွေကိုနားထောင်ပါ
ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုပြုလုပ်ပါ၊ ရာသီဥတုကိုစစ်ဆေးပါ၊ таймерများကိုသတ်မှတ်ပါနှင့်အရာများကိုသင်၏အလုပ်စာရင်းသို့ထည့်ပါ
Q: built-in Alexa ဖုန်းတွင်ကျွန်ုပ်၏ OnePlus 8 စီးရီးတွင် Alexa သည်မည်သည့်ဘာသာစကားများကိုထောက်ခံသနည်း။
R: Alexa ကိုအမေရိကန်အင်္ဂလိပ်၊ အိန္ဒိယအင်္ဂလိပ်၊ ဗြိတိန်အင်္ဂလိပ်၊ စပိန်စပိန်၊ ပြင်သစ်၊ အီတလီနှင့်ဂျာမန်တို့တွင်ရရှိနိုင်သည်။ Alexa တုံ့ပြန်သည့်ဘာသာစကားကိုပြောင်းလဲလိုပါကဖုန်းချိန်ညှိချက်များသို့သွားပါ၊ ဘာသာစကားများ> ဘာသာစကားများနှင့်ထည့်သွင်းမှုများ> လိုချင်သောဘာသာစကားကိုရွေးချယ်ပါ။ သို့သော်၊ ၎င်းသည်သင့်ဖုန်း၏ဘာသာစကားကိုလည်းပြောင်းလဲစေနိုင်ကြောင်းသတိရပါ။
Q: OnePlus 8 စီးရီးဖုန်းတွင်ကျွန်ုပ်သည် setup ကိုပြီးစီးပါပြီ။ သို့သော် Alexa ကတုံ့ပြန်ခြင်းမရှိပါသို့မဟုတ်တုံ့ပြန်မှုနှေးပါသည်။ ကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့ရလဲ
R: ညံ့သောဒေတာကွန်ယက်ဆက်သွယ်မှုသည် Alexa ၏တုန့်ပြန်မှုအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်။ သင်၏ဖုန်းကိုအင်တာနက်အမြန်နှုန်းဖြင့်ချိတ်ဆက်ထားပါ။ အကယ်၍ သင်အသံဆူညံသောဝန်းကျင်၌အသံလေ့ကျင့်မှုပြီးပါက Alexa Hands-Free သည်စနစ်တကျအလုပ်လုပ်မည်မဟုတ်ပါ။ Alexa သည်ပုံမှန်အလုပ်မလုပ်ပါကသင်၏လက်ရှိအသံလေ့ကျင့်မှုကိုဖျက်ပစ်ပြီးသင်၏အသံကိုထပ်လေ့ကျင့်ပါ။ တိတ်ဆိတ်သောဝန်းကျင်တွင်အသံလေ့ကျင့်မှုအသစ်တစ်ခုပြုလုပ်ရန်သေချာစေပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » OnePlus သည်၎င်း၏မေးခွန်းနှင့်အဖြေကဏ္ section ကိုအသစ်သောမေးခွန်းများနှင့်အတူမွမ်းမံသည်
MIUI 12 သည်သတင်းများနှင့်အလွန်သွက်လက်သောအသွင်အပြင်ဖြင့်ရောက်ရှိသည်
Nokia 5.1 Plus သည် Android 10 update ကိုရရှိသည်